Nkɔm a Yakob hyɛe ansa na ɔrewu (1-28)
Silo befi Yuda mu aba (10)
Yakob kyerɛɛ sɛnea wonsie no (29-32)
Yakob wui (33)
49 Na Yakob frɛɛ ne mma ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mommoa mo ho ano na menkyerɛ mo nea ɛbɛto mo wɔ awiei nna no mu. 2 Yakob mma, munhyia na muntie; muntie mo papa Israel. 3 “Ruben,+ wone me ba panyin,+ me tumi ne m’ahoɔden mfiase; anka woyɛ ɔkɛse wɔ anuonyam ne tumi mu. 4 Woanhyɛ wo ho so; wote sɛ nsu a etue waa, enti worenyɛ ɔkɛse, efisɛ woforoo wo papa mpa.+ Wuguu me mpa ho fĩ saa bere no. Ɔforoe ampa! 5 “Simeon ne Lewi yɛ anuanom.+ Wɔn sekan yɛ awudi sekan.+ 6 Me kra,* wo ne wɔn mmmɔ fekuw. Me koma,* nkɔfra wɔn asafo mu, efisɛ wɔn abufuw mu na wokunkum nnipa,+ na wɔn atirimɔdensɛm nti wotwitwaa anantwi srɛ akyi ntini. 7 Nnome nka wɔn abufuw, efisɛ na ɛboro so, ne wɔn anibere, efisɛ na ano yɛ hyew.+ Mɛkyekyɛ wɔn mu wɔ Yakob mu na mabɔ wɔn ahwete Israel.+ 8 “Wo Yuda+ de, wo nuanom bɛkamfo wo.+ Na wo nsa beso w’atamfo kɔn akyi.+ Wo papa mma bɛkotow w’anim.+ 9 Yuda yɛ gyata ba.+ Me ba, wobɛwe wuram nam asɔre akɔ. Ɔda hɔ twe ne mu sɛ gyata, na obi a ɔte sɛ gyata de, hena na ɔbɛpɛ ne ho asɛm akonyan no? 10 Ahempoma remfi Yuda nsa,+ na tumi poma remfi ne nan ntam, kosi sɛ Silo* bɛba;+ ɔno na aman betie no.+ 11 Ɔde n’afurum asã bobe dua ho, na ɔde n’afurum ba asã bobe dua pa ho. Ɔbɛhoro n’ataade wɔ bobesa mu, ne ne nguguso wɔ bobe nsu* mu. 12 Bobesa ama n’ani ayɛ kɔɔ, na nufusu ama ne se ayɛ fitaa. 13 “Sebulon+ bɛtena mpoano, baabi a ahyɛn gyina,+ na ne hye a ɛwɔ akyiri no bɛtrɛw akɔ Sidon fam.+ 14 “Isakar+ yɛ afurum hoɔdenfo a obutuw hɔ na ɔso nnesoa abien. 15 Obehu sɛ tenabea hɔ ye na asaase no yɛ papa. Ɔbɛbɔ ne mu ase agye nnesoa na wayɛ nkoadwuma. 16 “Dan+ yɛ Israel mmusuakuw no mu baako, na obebu ne nkurɔfo atɛn.+ 17 Dan bɛyɛ ɔwɔ a ɔda kwankyɛn, ɔnanka a ɔda kwan ho. Ɔbɛka ɔpɔnkɔ nantin ama nea ɔte so no abu ahwe n’akyi.+ 18 O Yehowa, wo nkwagye na m’ani da so. 19 “Gad+ de, dɔm bɛtow ahyɛ no so, nanso ɔbɛtoa wɔn akɔtow ahyɛ wɔn so.+ 20 “Aser+ aduan* bɛdɔɔso,* na ɔbɛma nkurɔfo anya aduan papa te sɛ ahemfo aduan.+ 21 “Naftali+ yɛ ɔwansan a ne ho yɛ hare. Ɔbɛka nsɛm a ɛyɛ dɛ.+ 22 “Yosef+ yɛ nkorabata wɔ dua a ɛsow aba ho, nsu ho dua a ɛsow aba pii; nea ne nkorabata tra ɔfasu no. 23 Nanso agyantofo tuu wɔn ani sii no so, wɔtotow agyan baa no so, na wɔfaa ne ho tan.+ 24 Ne nyinaa akyi no, n’agyan mu anyɛ mmerɛw,+ na ne nsa a ɛyɛ den na enim ko no nso, emu angow.+ Eyi fi ɔhoɔdenfo a ɔtaa Yakob akyi no nsam, Israel botan ne ɔhwɛfo no. 25 Ofi* Onyankopɔn a wo papa som no no hɔ, na ɔno na ɔbɛboa wo; ɔne ade nyinaa so Tumfo no na ɛnam, na ɔno na ɔde ɔsoro nhyira ne subun a ɛwɔ fam nhyira behyira wo;+ ɔde nufu ne yafunu mu nhyira behyira wo. 26 Wo papa nhyira bɛkyɛn nhyira a efi mmepɔw ne nkoko fɛfɛ a etim hɔ daa so.+ Ɛbɛtena Yosef ti so, ɛbɛtena nea woyii no fii ne nuanom mu no apampam.+ 27 “Benyamin+ bɛtetew n’atamfo mu te sɛ ɔpataku.+ Anɔpa ɔbɛwe aboa a wakyere no, na anwummere nso ɔbɛkyɛ ɔko mu nneɛma afa.”+ 28 Eyinom nyinaa ne Israel mmusuakuw 12 no, na eyi ne nsɛm a wɔn papa kae bere a ɔrehyira wɔn no. Nea ɛfata obiara na ɔde hyiraa no.+ 29 Afei ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ɛrenkyɛ wɔde me bɛkɔ akɔka me nkurɔfo ho.*+ Munkosie me nka m’agyanom ho wɔ ɔbodan a ɛwɔ Hitini Efron asaase so no mu.+ 30 Eyi ne ɔbodan a ɛwɔ Makpela asaase so wɔ Mamre anim wɔ Kaanan asaase so no; ɔbodan yi na Abraham tɔ fii Hitini Efron hɔ de yɛɛ amusiei no. 31 Ɛhɔ na wosiee Abraham ne ne yere Sara,+ ɛhɔ na wosiee Isak+ ne ne yere Rebeka, na ɛhɔ ara nso na misiee Lea. 32 Het asefo na wɔtɔn asaase no ne ɔbodan a ɛwɔ so no.”+ 33 Bere a Yakob ne ne mma no kasa wiei no, ɔmaa ne nan so guu mpa so na oguu ahome a etwa to, na wɔde no kɔkaa ne nkurɔfo ho.*+
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Me honhom.”
^ Ɛkyerɛ, “Nea Ade Wɔ No.”
^ Anaa “bobe mogya.”
^ Nt., “bɛdɔ srade.”
^ Kyerɛ sɛ, Yosef.